Iindaba - Loluphi uhlobo lweZipili zePlastiki ezinokuthi zitshintshe iizipili zeglasi ngaphandle kokudodobala kwimeko yeendawo ezinkulu?
Loluphi uhlobo lweZipili zePlastiki ezinokuthi zitshintshe iZipili zeglasi ngaphandle kokudodobala kwimeko yeendawo ezinkulu?
Kuqala kufuneka siqonde ezona mpawu zisisiseko zezi zinto:
Inzuzo: ukukhanya okuphezulu, ukugquma kwesipili kunokuba kwelinye icala, isiphumo esihle sokukhusela ukutyabeka okubonisa, ukumelana nefuthe (i-17 x yomelele kunezibuko zeglasi) kunye ne-shatterproof, ubunzima bokukhanya, omelele kwaye oguqukayo
Ukungancedi: intwana encinci
2. Isibuko seplastiki sePVC
Uncedo: ngexabiso eliphantsi; ubunzima obuphezulu; unokunqunyulwa kwaye ugobe kubume
Ukungancedi: izinto ezisisiseko azicacisi, ukugquma kwesipili kunokuba ngaphambili kuphela, kunye nokugqiba okuphantsi
Isipili sePolystyrene (isibuko sePS)
Inexabiso eliphantsi. Izinto ezisisiseko sazo zibonakala ngokucacileyo, kwaye ibukeka ngathi inobukrakra
4.Isipili sePolycarbonate (isibuko sePC)
Elubala Medium, ukuba inzuzo yobulukhuni elungileyo (amaxesha 250 eyomeleleyo kuneglasi, amaxesha 30 ngaphezu acrylic), kodwa ukuba amaxabiso aphezulu
5. Isibuko seglasi
Inzuzo: inkqubo yokuvuthwa evuthiweyo, umgangatho ophezulu wokuboniswa, ixabiso eliphantsi, ubuninzi bomhlaba othe tyaba, uninzi lwezinto ezinzima
Ukungancedi: ubukhulu bobukrakra, obungakhuselekanga emva kokuba wophukile, ukunganyamezelani kwefuthe, ubunzima obunzima
Ukushwankathela, indawo ebambeleyo, ekungekho lula ukuyikhubaza, engasindi, kwaye engoyiki ukwaphulwa, yinto ye-acrylic. Nazi izizathu ezimbalwa zokusebenzisa isibuko se-Acrylic plexiglass njengesixhobo sokubuyisela kwiglasi yezimbiwa:
● Ukuchasana nefuthe-i-Acrylic inokuchasana okuphezulu kuneglasi. Kwimeko apho kukho nawuphi na umonakalo, i-acrylic ayiyi kutyhoboza ibe ngamaqhekeza amancinci kodwa endaweni yoko, iya kuqhekeka. Amashiti e-acrylic anokusetyenziswa njengeplastikhi yegreenhouse, iifestile zendlu yokudlala, iifestile zeshedi, izibuko ze-perspex
iifestile zenqwelomoya njl. njengenye indlela yeglasi.
● Ukuhanjiswa kokukhanya -Amashiti e-Acrylic ahambisa ukuya kuthi ga kwi-92% yokukhanya, ngelixa iglasi inokuhambisa kuphela ukukhanya okungama-80-90%. Ngokucacileyo njengekristale, iishiti ze-acrylic zihambisa kwaye zibonise ukukhanya okungcono kuneglasi yodidi.
● Ubume bendalo-i-Acrylic yindlela efanelekileyo yeplastiki, enophuhliso oluzinzileyo. Emva kokuveliswa kwamashiti e-acrylic, anokuphinda asebenze kwakhona ngenkqubo yokurhola. Kule nkqubo, amaphepha e-acrylic atyunyuziwe, emva koko afudunyezwe ngaphambi kokuba inyibilikiswe kwisiraphu engamanzi. Nje ukuba inkqubo igqitywe, amaphepha amatsha anokwenziwa kuyo.
● Ukuxhathisa kwe-UV -Ukusebenzisa amashiti e-acrylic ngaphandle kuveza umbandela kwimilinganiselo ephezulu yemitha ye-ultraviolet (UV). Iimakhishithi ze-Acrylic zikwakhona kunye nefilitha ye-UV.
● Iindleko ezisebenzayo- Ukuba ungumntu othanda uhlahlo-lwabiwo mali, uyakonwabela ukwazi ukuba amashiti e-acrylic yindlela eyongayo kunokusebenzisa iglasi. Iphepha le-acrylic linokuveliswa ngesiqingatha seendleko zeglasi. La maxwebhu eplastiki alula ngokobunzima kwaye anokuhanjiswa ngokulula, okwenza ukuba iindleko zokuhambisa ziphantsi.
● Yenziwe ngokulula kwaye imile- Iishiti ze-Acrylic zineempawu ezifanelekileyo zokubumba. Xa ushushu ukuya kuthi ga kwiidigri eziyi-100, inokubunjwa ngokulula ibe linani leemilo kubandakanya iibhotile, imifanekiso yezakhelo kunye neetyhubhu. Njengoko iphola, i-acrylic ibambelela kwimilo eyenziweyo.
● Khaphukhaphu -i-Acrylic inobunzima obungama-50% ngaphantsi kweglasi eyenza kube lula ukuyiphatha. Njengoko ithelekiswa neglasi, ii-acrylic sheet zilula kakhulu ukusebenza nazo kwaye zinokuhanjiswa ngokulula ukusuka kwenye indawo ziye kwenye.
● Iglasi njengokukhanya - I-Acrylic inepropathi yokugcina ukukhanya kwayo kwaye ithatha ixesha elininzi ukubuna. Ngenxa yokuqina kwayo kunye nokucaca kokukhanya, uninzi lwabakhi bakhetha ukukhetha iishiti ze-acrylic ukuba zizisebenzise njengeepaneli zeewindows, zokugcina izindlu, isibhakabhaka kunye neefestile zangaphambili.
● Ukhuseleko kunye namandla - kunokubakho izizathu ezininzi zokuba ufuna iifestile zamandla aphezulu. Nokuba uyayifuna ngenjongo yezokhuseleko okanye ukumelana nemozulu. Amashiti e-acrylic anamaxesha ali-17 omelele kuneglasi, oko kuthetha ukuba kuthatha amandla amakhulu ngakumbi kwi-acrylic shatterproof. La maxwebhu enzelwe ukubonelela ngokhuseleko, ukhuseleko kunye namandla ngaxeshanye enza ukuba iglasi ibonakale i-acrylic enkulu njengokutshintsha
Kule minyaka idlulileyo, ukusetyenziswa kwe-acrylic sheeting kugqithile kwiglasi ngokwendlela yokusebenza kunye nokusetyenziswa okuninzi, okwenza iglasi ye-acrylic ibe yongayo, yomelele kwaye isebenze ngakumbi kwiglasi.